Microsoft Office 2016 pro plus Retail Box PKC Version factory and suppliers | Aoxun
Microsoft Office 2016 လိုလားသူပေါင်းလက်လီ Box ကို PKC ဗားရှင်း
မော်ဒယ်အရေအတွက်: Office ကို 2016 Pro ကို Plus အား
လက်မှတ်: Microsoft က certificate
မူလအစရာ: အမေရိကန်နိုင်ငံ / အိုင်ယာလန်
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: 10 ကိုအပိုင်းပိုင်း
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: နျ Standard စက်ရုံ OEM Package ကိုချိတ်ပိတ်
ကြာချိန်: 1 -3အလုပ်အဖွဲ့နေ့ရက်များ
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T, Western Union, MoneyGram, Credit Card ကို
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 20000 ကိုအပိုင်းပိုင်း
activation: 100% activation အွန်လိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံး
လိုအပ်သောပရို SSE2 နှင့်အတူ x86- သို့မဟုတ် x64-bit Processor 1 gigahertz (Ghz) ​​သို့မဟုတ်ပိုမြန်
လိုအပ်တဲ့ Operating System ကို Windows7ကိုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း Windows Server 2008 R2, သို့မဟုတ် Windows Server ကို 2012 ခုနှစ်,
လိုအပ်သောအချက်အလက်များသိုလှောင် 1 GB RAM (32 bit နဲ့);2GB RAM (64 bit)
လိုအပ်တဲ့ Hard Disk ကို Space ကို 3.0 GB ကိုရရှိနိုင် disk space ကို
တောင်းဆိုနေတဲ့ပြရန် 1280 x 800 resolution နဲ့
ဂရပ်ဖစ် ဂရပ်ဖစ် hardware acceleration ကိုတစ်ဦး DirectX 10 နဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ်
အသစ် Office ကိုရောက်ရှိလာခဲ့သိရသည်။ ဒါဟာအမှုတို့ကိုပြုရနှင့်သွားလာရင်းချိတ်ဆက်နေ, သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များတိုက်ဖျက်မည်ကူညီပေးသည်တဲ့အစွမ်းထက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအအသစ်နှင့်တိုးမြှင် features တွေအစဉ်မပြတ်ဆက်ပြောသည်ခံနှင့်အတူတစ်စိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံနှင့်အားလုံးပါဆုံးကို up-to-date ဖြစ်အောင်ရုံး application များအတွက်ဝင်ပါ။
Windows 8 ကိုကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာ Office ကိုတွေ့ကြုံခံစား
- Access ကိုအဘယျသို့ညာဘက်ရှေ့တက်သင့်ရဲ့အများဆုံး-အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများ, application များနှင့်လူများကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရည်ကို interface နှင့်အတူစတင်ကနေအရေးပါ
ဖန်တီးသစ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် browse-သုံးပြီးကီးဘုတ်, ကလောင်, ဒါမှမဟုတ် touchscreen က - ။
- သင့်အကောင့်ကို Sign နှင့်သင့်ရုံး applications များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပြင်အဆင်များ, လက်ျာဘက်ရှိသူတို့ကိုသင်ကျန်ရစ်မယ့်လမ်းကိုဖြစ်ကြသည်။
- ကသွားလာရင်း access ကို, ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ရှယ်ယာရန်လွယ်ကူမယ့်ဘယ်မှာ SkyDrive ကိုသို့မဟုတ် SharePoint တွင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့အလုပ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ။
- ကြည့်ရန်မျိုးစုံအီးမေးလ်အကောင့်ကို Facebook က updates များကိုနှင့် LinkedIn တို့အားလုံး Outlook နဲ့အတူတစ်နေရာတည်းတွင် feeds ။
- တိကျတဲ့စာရွက်စာတမ်းများ, က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သင့်လှုပ်ရှားမှုအစာကျွေးခြင်းမှကယ်နှုတ်ကလူအပေါ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော updates များကို Get နှင့်ညာဘက်ရုံးအတွင်း Co-လုပ်သားများနှင့်အတူ chatting အားဖြင့် Real-time အတွက်ချိတ်ဆက်နေဖို့။
site ကိုစာတိုက်ပုံးများကို အသုံးပြု. Outlook နဲ့မှတိုက်ရိုက် SharePoint ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Exchange နှင့်စာရွက်စာတမ်းများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ Access ကိုတည်းဖြတ်စီမံကိန်းကို-related အီးမေးလ်။
Outlook နဲ့ပေါ်လစီသိကောင်းစရာများနှင့်ချိန်းမှာ Data ဆုံးရှုံးမှုတားဆီးရေး အသုံးပြု. ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်ခံသူများမှအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအီးမေးလ်ပို့မှားယွင်းစွာရှောင်ကြဉ်ပါ။
အိုင်တီ SharePoint ဖို့ထားတဲ့ IM ပြောဆိုမှုများအပါအဝင်အစည်းအဝေးများ, မှတ်တမ်းတင်ထားသောအုပ်စုတစ်စုမူဝါဒနှင့် archive ကိုမှတဆင့်စီးပွားရေးအစည်းအဝေးများများအတွက် Skype ကို၏အသံဖမ်း enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်။
Excel ကိုအတွက်မေးမွနျးပါသုံးပြီးမှားယွင်းမှုများ, ဝှက်ထားသောအချက်အလက်, ကျိုးလင့်များနှင့်ရှေ့နောက်မညီအဘို့စာရင်းဇယား scan လုပ်ပါ။ စာရင်းဇယားနှင့်အတူစာရင်းဇယားများတွင်အပြောင်းအလဲများကြည့်ရန်စာရင်းစစ်လမ်းကြောင်းနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသော volumes ကို၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ကိုင်တွယ်ချောမွေ့နှင့် Excel ကိုထဲမှာ Power မဏ္ဍိုင်ဇာတိကို အသုံးပြု. အလျှင်အမြန်သတင်းအချက်အလက်ဆန်းစစ်လုပ်ဆောင်။
သင့်ရဲ့ဒေတာ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောသစ်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်မဏ္ဍိုင်စားပွဲပေါ်မှာသို့မဟုတ်မဏ္ဍိုင်ဇယားအတွင်းကလစ်အတွက်သင့်ရဲ့ဒေတာအမျိုးမျိုးဖြတ်တောက်မှုနှင့်အမြင်များ Explore ။
အားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အပြန်အလှန် visualization နှင့်တင်ပြချက်အတှေ့အကွုံနှငျ့အတူဘဝကိုမှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုရောက်စေဖို့တစ်ခုတည်းကို Power ကြည့်ရန်သို့ဒေတာ, ဇယားများနှင့်ဂရပ်များ compile ။
စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲများအတွက် Skype ကိုအတွက်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံသင်တန်းသားများကို '' ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပါ။
စံချိန်စံညွှန်းများ-based H.264 ဗီဒီယိုသုံးပြီးပိုပြီး Endpoints ချိတ်ဆက်ပါ။
လွယ်ကူသောပြန်ဖွင့်ဘို့စံချိန်စံညွှန်းများ-based format နဲ့စံချိန်အစည်းအဝေးများနောက်ပိုင်းတွင်
Windows ကို: Office ကို & ဆာဗာ:
ပြတင်းပေါက် 10 လိုလားသူ coa စတစ်ကာ
Multi-ဘာသာစကား သာ Office ကို 2019 key ကိုကဒ်
ပြတင်းပေါက် 10 လိုလားသူ OEM အထုပ်
အင်္ဂလိပ် / အခြားအ / ကိုးရီးယား / စပိန် / ပြင်သစ် / အီတလီ Office ကို 2016 Pro ကို Plus အားလက်လီ box ကို DVD ကို + key ကိုကဒ်
ပြတင်းပေါက် 10 လိုလားသူလက်လီ box ကို
အင်္ဂလိပ် / ကိုးရီးယား / ပြင်သစ် Office ကို 2016 Pro ကို Plus အားလက်လီ box ကို PKC key ကိုကဒ်သာ
ပြတင်းပေါက် 10 နေအိမ် coa စတစ်ကာ
Multi-ဘာသာစကား သာရဲ့ MAC လက်လီ box ကို PKC key ကိုကဒ်များအတွက် Office ကို 2016 Home နဲ့ bussiness
ပြတင်းပေါက် 10 နေအိမ် OEM အထုပ်
အင်္ဂလိပ် Office ကို 2016 Home နဲ့ Student လက်လီ box ကို PKC key ကိုကဒ်သာ
ပြတင်းပေါက် 10 နေအိမ်လက်လီ box ကို
အင်္ဂလိပ် Office 2013 ကို Pro ကို Plus အားလက်လီ box ကို DVD ကို + key ကိုကဒ်
ပြတင်းပေါက်7လိုလားသူ coa စတစ်ကာ
Multi-ဘာသာစကား Server ကို 2012 ခုနှစ်စံ R2 OEM အထုပ်
ပြတင်းပေါက်7လိုလားသူ OEM အထုပ်
အင်္ဂလိပ် / ပြင်သစ် Server ကို 2012 ခုနှစ်စံလက်လီသေတ္တာ
ပြတင်းပေါက် 8.1 လိုလားသူ coa စတစ်ကာ
Multi-ဘာသာစကား ဆာဗာ 2016 စံ oem အထုပ်
ပြတင်းပေါက် 8.1 လိုလားသူ OEM အထုပ်
အင်္ဂလိပ် / ပြင်သစ် ဆာဗာ 2016 စံလက်လီသေတ္တာ
ယခင်: Microsoft Office 2016 လိုလားသူပေါင်းလက်လီ Box ကို Full Version
နောက်တစ်ခု: Office 2016 Home And Business for MAC Retail box
Microsoft Office 2016 လိုလားသူပေါင်း 1 DVD ကို + 1 Key ကို Ca ...
MAC ကို Microsoft Office ကိုနေအိမ်နှင့်စီးပွားရေး 2016 ...